အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆	2
Posted by kai on Nov 29, 2016 in Editor's Notes |2comments
နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့က ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သော အမေရိကသမ္မတသည် ကမ္ဘာကြီးအား လာမည့်နှစ် ၂၀၁၇ တွင်ဥပဒေသများချကာ “အသစ်ထုဆစ်” ပုံဖေါ်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးတွင်လည်း လက်ယာသမား ကွန်ဆာဗေးတစ်များ နေရာရစိတ်လာပေရာ အမျိုးသားရေးလည်းတွဲပါလာကြသဖြင့် ဆိုင်ရာနိုင်ငံတို့သည် မိမိတို့အကျိုးစီးပွားကိုသာ ဦးထိပ်တင်ထားကြမည့်သဘောဖြစ်ပေ၏။
မျက်မှောက်အခြေအနေတို့ကို အချက်အလက်တချို့နှင့် နိမိတ်ဖတ်ဆ၀ါးကြည့်ရင်း ပုံမှန် “နေထွက်တရက်”နှင့်အတူ ရောက်လာတော့မည့်၂၀၁၇ကို ကြိုဆိုပါရစေ။
The People vs. System
ဟီလာရီကလင်တန်သည် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ထက် လူထုမဲဆန္ဒပေါင်း ၂သန်းကျော်အနိုင်ရလျှက် “လူထု”က ဟီလာရီကလင်တန်အားရွေးလျှက်ရှိနေသော်ငြား အမေရိကား၏ ဒီမိုကရေစီ”စနစ်”သည် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုသာ သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ထားပေသည်။
ဒီဇင်ဘာ၁၉ရက် နေ့တွင် အပြီးသတ်ထွက်လာမည်ဖြစ်သော Electoral votes များအရ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် လိုအပ်သော ၂၇၀ကို သိသာစွာကျော်ကာ ၃၀၆ဖြင့်ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ရက်နေ့တွင် ၄၅ယောက်မြောက်သမ္မတအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပါလိမ့်မည်။
ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် တပြည်လုံးမြို့ကြီးများ၏ လူထုနှင့်ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုများလည်း မှေးမှိန်လာခဲ့ပြီ။ အချို့ပြည်နယ်များ၏ မဲပေးမှုတွင် ကွန်ပျူတာစနစ်အားဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ကာ မဲစာရင်းပြင်ဆင်မှုအထောက်အထားအချို့ရှိသဖြင့် မဲပြန်လည်တွက်ဆိုရန်တိုက်တွန်းမှုတချို့ရှိနေငြားအနိုင်ရပြီးသော သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ “ဒေါသ”ကို ကျော်နိုင်ရန်မလွယ် ။ ထိုအချိန်ထဲမှာပင် သမ္မတသစ်သည် သူ၏ကက်ဘိနက်ကို ဖွဲ့စည်းနေရာ၌ သူနှင့်မတူညီ(ခဲ့)သူများကို စုစည်းသိမ်းသွင်းကာ ရွေးချယ်နေပုံရသဖြင့် မတူညီခြင်း၏စုစည်းအင်အားကြီးဖြစ်လာမည်ကို မြင်နေကြရသည်။
နိုင်ငံတကာတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသော ဘီလီယံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီး၏ Chairman အနေဖြင့် အမေရိကသမ္မတတက်လုပ်တော့မည်ဖြစ်ပေရာ “အကျိုးစီးပွားရောသမ ပဋိပက္ခ” Conflict of Interest ဖြစ်မည်မှာသေချာနေသည်။
သူ၏အားအကိုးဆုံး သားမက် Jared Kushner အားလည်း သမ္မတ၏နေ့စဉ်ပို့ချချက်များ နားထောင်နိုင်စေရန်အထိပင် နိုင်ငံတော်သို့ လုံခြုံရေးကင်းရှင်းမှုတောင်းခံထားပေရာ အဆိုပါသားမက်သည် သူ၍လုပ်ငန်းနှင့် အစိုးရတို့အကြား ပေါင်းကူးကြိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
ဂျာမန်ဇာတိနွယ်နှင့် လူဖြူစိတ်ကဲလွန်းသူဖြစ်ကာ ဂျူးဘာသာဝင်မြေးများရှိသည့် စီးပွားရေးသမားကြီးဖြစ်သည့်အပြင် ဒေ၀ါလီခံ ၄ခါလုပ်ဖူး၍ တရားမ၀င်အလုပ်သမားများသုံးစွဲရသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သူ။ တီဗီမီဒီယာလောကတွင်နက်နက်နဲနဲပါဝင်ကာ ဆယ်လီဘရိပ်တီဖြစ်ဖူးသူသည် အမေရိကန်လူထုကို မည်သို့ဦးဆောင်သွားမည်နည်း။
“America First” ကိုသာ မူလစိတ်ရင်းထဲထားပုံပေါ်ပြီး နိုင်ငံရေးကို (စီးပွားရေးကဲသို့) အကျိုးစီးပွားနှင့် အရှုံးအမြတ်အခြေအနေကြည့်၍ ပြောင်းလဲကစားမည်သူဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ လိုအပ်လျှင် ၉၀ဒီဂရီသာမက ဂငယ်ကွေ့ပင်ကွေ့ချမည့် စိတ်ကို သူ့ရန်သူများဟု ဆိုရလောက်သူများအားကက်ဘိနက်အဖွဲ့တွင်းပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခန့်အပ်နေခြင်းများကပြသည်။
ဒေါ်လာသန်းထောင်ချီသုံးရလေ့ရှိသော ရွေးကောက်မဲဆွယ်ပွဲများအတွင်း မိမိကိုယ်ပိုင်ငွေ ဒေါ်လာသန်း၁၀၀ကျော်မျှသုံးယုံဖြင့် အနိုင်ရမည်ဟု လုံးဝယုံကြည်မှုရှိနေခဲ့သော ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် ငွေကို တိကျသေသပ်စွာအကျိုးရှိအောင်သုံးနိုင်သူလည်းဖြစ်၏။
စိတ်ဗီဇအရကောက် ပြောင်းပြန်တွက်လျှင်မူ သူ၏သမ္မတလက်ထက်တွင် အရှင်းရှင်ကြီးများ လုပ်ရပိုခက်ကာ အလယ်အလတ်တန်းစားများ အတွက် ကောင်းမွန်သော နှစ်များဖြစ်ရမည်သာ။
သမ္မတသစ်သည် ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စဉ်က ပေးထားခဲ့သော ကတိကြီးများကို စောင့်တည်ပေးမည့်ပုံမပေါ်ပေ။ အဆိုပါကတိတို့မှာ မဲရရန်သာရည်ရွယ်ရင်းရှိခဲ့ပုံရသည်။
သမ္မတ၏ရက်၁၀၀တွင်းဆောင်ရွက်မည်များကို အင်တာနက်ဗီဒီယိုဖြင့် ရှင်းပြရာတွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ကုန်သွယ်စာချုပ်များနှင့် ကာကွယ်ရေးပေါ်လစီများကိုတင်ပြခဲ့သည်။
ခိုးဝင်နေထိုင်နေသူ ၁၂သန်းမျှအထဲမှ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ထားသည့် ၃သန်းကျော်အားနှင်ထုတ်မည့်အစီအစဉ်နှင့် ယူအက်စ်-မက်ဟီကိုနယ်စပ်တလျှောက် အုတ်တံတိုင်းကြီးဆောက်မည့်အစီအစဉ်ကို ဘေးခဏခေါက်ထားလိုက်ပြီး အကြမ်းဖက်သမားများအား နှိပ်စက်၍သတင်းနှိုက်ယူခြင်းပြုရန် အားပေးဖူးသူသမ္မတသစ်သည် ဘီယာတခွက်၊ စီးကရက်တလိပ်နှင့် သတင်းကောက်မည့် ထောက်လှမ်းရေးသဘောကိုလည်း ကြိုက်သွားဟန်ရှိသည်။
ဟီလာရီကလင်တန်ကို နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်များ ပေါက်ကြားစေမှုဖြင့် ထောင်ထဲပို့မည်ဆိုခဲ့ငြား သူကိုယ်တိုင်မှာမှု သာမန်အရပ်ဖက်ရှိထရမ့်မျှော်စင် မှနေ၍ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် သာမန်ဆဲလ်ဖုံး၊ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ပြူတာတို့နှင့် ချိပ်ဆက်ပြောကြားပြီး ဖြစ်နေပြန်လေပြီ။
သမ္မတကျမ်းကျိန်ပြီးသည်နှင့် ပစိဖိတ်ရပ်ဝန်း နိုင်ငံများ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက် -TPP မှထွက်မည်ဆိုထားပေရာ အာရှဒေသတွင် ချိုင်းနားအားအုပ်စီးမိစေရန် ရည်ရွယ်ဖွဲထားခဲ့သည့် မဟာမိတ်နိုင်ငံတို့ နှင့်ကတ္တီပါလမ်းခွဲမည့်အပြင် သမ္မတအိုဘားမား၏ “Pivot to Asia” မှလည်းခွာမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဈေးကွက်ကြီးဖြစ်သော အမေရိကားသည် အာရှနိုင်ငံငယ်များနှင့် စည်းရုံးပူးပေါင်းခြင်းထက် စူပါပါဝါတို့အချင်းချင်းဖြစ်သော
ရုရှားနှင့်အဆင်ပြေပြေဆက်ဆံကာ ချိုင်းနားနှင့်အပေးအယူလုပ်မည့်ဟန်ပြနေသည်။ ဓနရှင်သည်ဓနရှင်အချင်းချင်းသာ မိတ်လုပ်လိုရင်းရှိသည်မဟုတ်ပါလား။
ရေနံထုတ်၍တင်ပို့ထိပ်တန်းနိုင်ငံဖြစ်သော ဆောဒီအာရေဗျထံမှလည်း ရေနံတို့မ၀ယ်တော့မူပဲ မိမိ၏ရေနံသိုက်များကို ထုတ်သုံးယုံတင်မက ပြန်တင်ပို့မည့်အခြေအနေရှိသော အမေရိကားသည် အီရန်နှင့်ချုပ်ဆိုထားသော ညူကလီယားလက်နက်နှင့် ဆန်ရှင်အလဲအထပ်စာချုပ်၊ ကျူးဘားအပေါ်ထားသည့် ပေါ်လစီတို့အားလည်းပြန်လည်သုံးသပ်လိမ့်မည်။ ယခုနိုဝင်ဘာလဆန်းတွင် စတင်အသက်ဝင်နေပြီဖြစ်သော ကမ္ဘာ့ရာသီပြောင်းထိန်း ပဲရစ်မြို့သဘောတူညီချက်ကိုလည်း မျောလိုက်မည့်ပုံပေါ်သည်။
တက်ဆပ်ပြည်နယ်တွင် အလွန်တရာကြီးမားသော ရေနံစိမ်းသိုက်ကြီးတွေ့ထားလိုက်ပေရာ ကမ္ဘာ့ရေနံအသုံးဆုံးနိုင်ငံမှသည် အထုတ်ဆုံးနိုင်ငံပြောင်းမည့်ဟန်တည်း။
ဒေါ်လာ ထရီလီယံသုံးကာ အမေရိကားပြည်၏ အင်ဖရာစရပ်ခြာ အခြေခံအဆောက်အအုံတို့ကို တိုးမြှင့်ဆောက်လုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲကတိကို အကောင်အထည်ဖေါ်ပေလိမ့်မည်။ ဘက်ဂျက်ငွေအသုံးကြမ်းမည့် သမ္မတသစ်သည် ပြည့်ဝင်ငွေကိုဘယ်လိုရှာမည်နည်းအတွက်လည်းအဖြေရှိနေဟန်ရှိပါသည်။ ကွန်ဂရက်နှင့် ဆီးနိတ်တို့တွင်လည်း ပါတီတူ ရီပါ့ဗလစ်ကင်န်တို့သာ အများစုအနိုင်ရထားပေရာ ဥပဒေကြောင်းအရလည်း ပံ့ပိုးကြရန်ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်။
ခြုံ၍ဆိုရလျှင် အမေရိကားအနာဂါတ်အတွက် စိုးရိမ်စရာကား လုံးဝမရှိ။
အာရှတွင် အမေရိကားနောက်ဆုတ်သမျှ ဂျပန်၊ချိုင်းနား၊အိန္ဒိယတို့ လုတက်လာကြမည်ဖြစ်၍ အာရှသည် ညူကလီးယားနှင့် စစ်လက်နက်အပြိုင်တပ်ဆင်ကြခြင်းအားဖြင့်တို့လည်း တိုင်းပြည့်ငွေတို့ ရင်းစားရပေတော့မည်။
၂၀၁၇တွင် မြန်မာပြည်သည် ဒေသန္တရအခြေအနေအရ ကြီးစွာသောအလှည့်အပြောင်း ဂယက်တို့ကို ရင်ဆိုင်ရပေလိမ့်မည်။ အချက်ယူတတ်လျှင် အကျိုးရှိ၍ အခက်ယူလျှင် “ကျဆုံးနိုင်ငံ”အထိသွားနိုင်သည့် အချိုးအပြောင်းခေတ်ပါပေ။
နယ်စပ်ဒေသများတွင် ရှိသော တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများနှင့်ကြားခံ၍ မြန်မာ့အရေးထဲ ၀င်ကစားနေမှုများကြောင့် မြန်မာလူထုသည် ချိုင်းနား/ချိုင်းနီးစ်တို့အားမုန်းတီးနေကြပြီဖြစ်သော်ငြား တိုင်းပြည်တခုဟူသည် ဓနအင်အားမရှိလျှင် ဘာမှလုပ်၍မရ၊ ယခင်ဆယ်စုနှစ်များကဲ့သို့ အမေရိကန်ဖဲချပ်နှင့်ကစားရန်ခေတ်အချိန်မဟုတ်တော့သည်ကိုလည်း သတိပြုသင့်သည်။
ငွေကြေးဓနနှင့် တဦးချင်းအလုပ်သမားအရည်အချင်းတွင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးတို့နှင့် မည်သို့မျှ ယှဉ်မရနိုင်တော့သော မြန်မာပြည်သည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို အားကိုး၍မဖြစ်နိုင်(သေး)၊ အရှေ့အနောက်တောင်မြောက်ဒေသတို့ ချိပ်ဆက်လျှက်ရှိနေသော မိခင်သဘာဝပေးသည့် မူလအခွင့်အရယူကာ ဟိုမှာပစ္စည်းဒီပို့၊ ဒီကရိက္ခာ ဟိုတင်နှင့် ရွေ့ပြောင်းသယ်ဆောင်ခြင်း Logistic သာလျှင် စီးပွားရေး၏ကိုးကွယ်ရာဖြစ်ရမည်ဟုဆိုချင်သည်။
လောလောဆယ်တွင်ကား အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံဖြစ်နေ၍ ဒေသန္တာရအခြေအနေအရ ခွာပြဲမရဖြစ်သော ချိုင်းနားနှင့်ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ်ပြန်လုပ်ကာ စာချုပ်ဟောင်းတို့ ပြန်ပြင်ချုပ်၍ ချီတက်ရလိမ့်မည်။
လက်ရှိအစိုးရအတွက်နိုင်ငံရေးသေကြောင်းကြံခြင်းဖြစ်နိုင်ငြား အခြား ရွေးစရာလမ်းကား ထင်ရှားမရှိ။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းများကို ကန့်သတ်လျှက်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ကျောက်ဖြူ -ကူမင်းပိုက်လမ်း၊ရထားလမ်းတို့မှသည် ချိုင်းနား၏ One Belt, One Road အကောင်အထည်ဖေါ်မဟာဗျုဟာတွင် မျောလိုက်ခြင်းတို့ဖြင့် လျှပ်စစ်ကြိုး/ရထား/ကားလမ်းကွန်ယက်ကြီးများ”ဖိဆောက်”ခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် Facebookမှအတိတ်စိမ်းယူကာ အရေခွံပါးနေမည့်အစား အရေထူထူဖြင့် ပြုပါ/လုပ်ပါဟု တိုက်တွန်းလိုက်ပါကြောင်း။
Thint Aye Yeik says: မြန်မာ အစိုးရအဖွဲ့သာ ဂဇက်ရွာထဲ မန်ဘာအဖြစ် ဝင်ရောက်ဖူးပါက အရေထူမည်မှာ မလွဲဧကန် အမှန်ဖြစ်တော့သည်။
ကထူးဆန်း says: သူကြီးပြောတဲ့ အဲ့ logistic ကို အားယူ နေပုံ ရပါတယ် .. AH တွေ ရေလမ်းတွေ အဆင့်မြင့်တင်ဖို့ဇောင်းပြင်နေတာ တွေ့လေရဲ့ …. ခြင်္သေ့ နိုင်ငံကိုလည်း အတုယူမယ် ထင်ပ … ဒေါ်စုပြောတဲ့ စကားကြည့် ရတာ….
ဆိုးတာကတော့ အမြန်မောင်းမ၇တဲ့ မမြန်လမ်း ကြီးကို ရက် ၁၀၀ တွင်းပြင် ပြမယ် ကြုံးဝါး ပြီး ခုထိ မပြီးသေးတာဘဲ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.